John Michael Osbourne, Ozzy Osbourne, mpihira
Ozzy Osbourne(teraka amin'nyJohn Michael Osbourne, 3. December 1948 Aston, Birmingham) dia mpihira ny tarika Black Metal band Black Sabbath, natontan'i Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler ary Bill Ward. Koa satria 80. 20 taona. Taonjato manao ara-barotra irery ary mahomby kokoa noho ny tamin'ny vondrona Black Sabata. Izany no iray amin'ireo tsara indrindra fantatra fa mampiady hevitra indrindra koa ny vatolampy mpihira amin'izao fotoana izao.
Miaraka amin'ny vadiny faharoa, Sharon dia manomana ny fetiben'ny metaly Ozzfest isan-taona. Manana ankizy dimy izy - Jessica (1972), Louise (1975), Aimee (1983), Kelly (1984) ary Jack (1985).
Teraka tany Birmingham, Aston, Angletera i Osbourne. I John Thomas rainy "Jack" Osbourne (1915-1977) dia niasa tamin'ny alàlan'ny fiovan'ny alina ho toy ny mpanamboatra fitaovana tao General Electric Company plc.Ny reniny, Lillian, dia Katolika iray tsy mahasarika, ary niasa tao amin'ny orinasa mpamadika ny maraina.Osbourne no zandriny enina, ary anabavy telo lehibe sy zandriny roa, Jean, Iris, Gillian, Paul, ary Tony. Ny fianakaviana dia nipetraka tao amin'ny trano kely anankiroa tao amin'ny Lodge Road ao Aston. Ny anaram-bosotra "Ozzy" dia avy amin'ny sekoly ambaratonga fototra.
Fampahalalana mifandraika koa dia hita ao amin'ny lahatsoratra Black Sabbath.
Tao amin'ny 1970, ny banditry ny Black Sabbath dia namoaka rakikira tsy mitonona anarana izay mbola tao anatin'io taona io ihany tamin'ny alàlan'ny platinum. Tamin'ny sabotsy mainty, navoakany ny rakitsoratra 10 izay namidy eran-tany tamin'ny 100 tapitrisa tapitrisa ankehitriny. Ny Sabata mainty dia nandray ny fandaharan-tany maro. Tao amin'ny 1974, nilalao tao California Jam izy ireo talohan'ny mpankafy 250 000.
Ny lalao solo
Ozzy Osbourne tany Cardiff, 1981
Tao amin'ny 1979 dia nandeha tamina lalao solo izy. Tao amin'ny 1981 dia namoaka ny solo voalohany voalohany izyBlizzard of Ozz. Vetivety teo dia nahatratra platina platinum efatra platinum ilay rakikira. Nandritra ny taona 1980 dia namoaka alalana fito izy, ny tsirairay dia namidy mihoatra ny 2 tapitrisa. Tao amin'ny lalao solo, namidiny sary an-tapitrisa tamin'ny alàlan'ny 70 izy. Ao amin'ny 1983, 250 nisafidy tamin'ny 000 1985 tao amin'ny Festival Amerikana. Tao amin'ny 1989 izy dia nanao ny fampisehoana mivantana ny Live Concert. Tao amin'ny XNUMX izy no nanao ny Festival Festival Moske. Io no fampisehoana rock lehibe voalohany tao amin'ny kintan'ny tandrefana tao amin'ny faritanin'ny Sovietika tamin'izany fotoana izany.
Nandritra ny sivy taona dia namoaka albums dimy izy. Samy nanjary platin ny isam-batan'olona ary misy ny mozika manerana izao tontolo izao. Ao amin'ny 1993, Grammy no nandresy "Performance Metal" ho an'ny "Tsy Tiako ny hanova izao tontolo izao".
Tao amin'ny 1996 dia niara-niasa tamin'i Sharon, vadiny sy mpitantana ny olona iray, Ozzfest, ny fetibe mozika nasionaly natokana ho an'ny vatolampy mafy hitady sy hampiditra talenta vaovao. Ny fandaharany tamin'ity fetibe ity dia notsidihan'ny olona iray tapitrisa tamin'ny 1,4. Ozzfest no atao isan-taona. Ny ampahany amin'ny tombony ho an'ny Ozzfest dia mankany amin'ny karazana fiantrana samihafa, anisan'izany ny Lifebeat.
Tao amin'ny 2000, nanana ny kintany manokana izy tao amin'ilay Hollywood Walk of Fame malaza. Nahazo Grammy hafa tao amin'ny sokajy Tsara Best Performance ny 2000 (tamin'ity indray mitoraka ho mpikambana ao amin'ny Sabata mainty indray) ity ho an'ny "Iron Man". Osbourne no mpandray anjara lehibe indrindra tamin'ny fampisehoanaThe Osbournes, izay navoakan'ny MTV.
Miaraka amin'ny Sabotsy mainty
Fampahalalana mifandraika koa dia hita ao amin'ny Discographie Black Sabbath.
Sabata mainty hoditra, Vol. 4(1972)
Sabata Sabata Sabata(1973)
Aza manao na inona na inona maty!(1978)
Lazao ny Devoly(1982) - concert album
Tsilo amin'ny volana(1983)
Ny ota farany(1986)
Randy Rhoads Tribute(1987) - concert album
Tsy misy fitsaharana ho an'ny ratsy fanahy(1988)
Lazao fotsiny hoe Ozzy(1990) - concert album
Tsy misy ranomaso intsony(1991)
Live & Loud(1993) - concert album
Tonga ny Ozzman(1997) - Fanangonana
Miaina ao Budokan(2002) - concert album
Ny Essential Ozzy Osbourne(2003) - Fanangonana
Prince of Darkness(2005) - Fanangonana
Under Cover(2005) - rakitsary mandrakitra
Memoirs of Madman(2014) - Fanangonana
2: Mandalo eto an-tany (Album, Ozzy Osbourne)
4: Tsy miala amin'ny ratsy (album, Ozzy Osbourne)
7: Akory (ala)
9: Diary ho an'ny Madman
10: Fiarabe matihanina
12: Bark amin'ny Moon
13: Tsy misy ranomaso intsony
15: Ny ota farany
16: Reunion (Album, Sabotsy mainty)
17: Sabotsy mainty, Vol. 4
19: Aza Matahotra Mihitsy!
23: Sabotsy mainty (hira)
24: Teknolojia Ecstasy
25: 13 (Album, Sabotsy mainty)
26: Sabotsy mainty
35: Nandritra ny Came sy ny Spider
37: Planeta Caravan
38: eo ambanin'ny Fonony
39: Rakitsary ny Sabotsy mainty
42: Nateraka indray
44: Sabotsy mainty (album)
45: Lisitry ny Sabotsy mainty hoditra
46: Mpanazava fiasa miasa
47: Mpitarika ny zava-misy
Ozzy Osbourne (teraka John Michael Osbourne, 3. 1948 Desambra Aston, Birmingham) dia mpihira ny Britanika metaly mavesatra tarika Black Sabata, izay nahitana Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler sy Bill Ward. Koa satria 80. 20 taona. Taonjato manao ara-barotra irery ary mahomby kokoa noho ny tamin'ny vondrona Black Sabata. Izany no iray amin'ireo tsara indrindra fantatra fa mampiady hevitra indrindra koa ny vatolampy mpihira amin'izao fotoana izao.
Black Rain no rakitsarin'ny Ozzy Osbourne ao amin'ny 2007. Ozzy Osbourne milaza fa izy ihany no nanoratra fa tsy misy alikaola. Ny album dia maitso sy maizina miaraka amin'ny tononkira, saingy misy ihany koa ballads maro izay nomen'i Ozzy an'i Sharon vadiny.
Down to Earth dia ny horonantsary masin'ny 2001 tamin'ny alàlan'ny mpihira anglisy Ozzy Osbourne. Nosoratana nandritra ny 2001 tao Los Angeles sy ny mpamokatra an'i Tim Palmer. Ny UK Albums Chart dia laharana faha-19 ary ao amin'ny Billboard 200 ka hatramin'ny fahaefatra.
Fankalazana ny andian-dahatsary solo faharoa an'ny mpihira anglisy Ozzy Osbourne. Navoaka tamin'ny Martsa 1987 avy amin'ny Epic Records sy Columbia Records ary novokarin'i Max Norman. Ny sarintany 200 no laharana faha-6 amin'ny sarimihetsika Billboard 1979, ary tany Etazonia dia indroa platinum. Natokana ho an'i Randy Rhoads ilay rakikira, izay 1982 ho an'ny mpandihy 1982 ho an'ny tarika Osbourne. Maty tamin'ny fiaramanidina kely tao 1980 izy. Ny rakikira dia mirakitra fampisehoana an-tsehatra avy amin'ny 1981 sy XNUMX.
Tsy misy fialan-tsasatra ho an'ny ratsy fanahy ny sarimihetsika solo-n'i Ozzy Osbor amin'ny solo-sainan'i Anglisy. Navoaka tamin'ny September 1988 izy io tamin'ny Epic Records sy Columbia Records. Ny mpamokatra azy dia Roy Thomas Baker sy Keith Olsen. Ity no rakikira voalohany amin'ny mpihira, izay notarihan'ny mpanoratra gitara Zakk Wylde, izay niara-niasa taminy nandritra ny taona maro.
Blizzard ny Ozz ny bitany irery trano fakana rakikira amin'ny teny anglisy mpihira rock mavesatra Ozzy Osbourne, navoaka tamin'ny 1980.Track listingSestavaOzzy Osbourne - Rhoads zpěvRandy - kytaraBob Daisley - basse, manampy vocals, gongLee Kerslake - amponga, percussion, Tubular Bells, tympányDon Airey - from klávesyznovuvydání 2002Robert ny Trujillo - baskytaraMike Bordin - amponga, percussion, timpani, gongDanny Saber - tubular bellsMark Lennon - manampy vocals
Atao hoe koa Osbourne manana maro toetra: Ozzy Osbourne (Jaona Michael Osbourne, * 1948) - am-boalohany anglisy rock mavesatra zpěvákSharon Osbourne (* 1952) - vadin'i Ozzy OsbourneaKelly Osbourne (* 1984) - mpihira sy ny zanakavavin'i Ozzy OsbourneaJeordie White (Jeordie Osbourne White), koa Twiggy Ramirez (* 1971) - US hudebníkPodobné
Niantsoantso no fahafolo, ary farany amin'ny alalan'ny anglisy Studio rakikira mpihira rock mavesatra Ozzy Osbourne, navoaka tamin'ny Jona 2010.Seznam skladebSestavaOzzy Osbourne - zpěvGus G - kytaraRob "Blasko" Nicholson - baskytaraTommy Clufetos - amponga, percussion
Sharon Rachel Osbourne (née Arden, * 9. 1952 Oktobra, Brixton, England, United Kingdom) dia anglisy mpanolotra, juror talenta TV seho, mpanakanto, mozika mpitantana, bussinessmanka, promotérka sy vavy vy mavesatra-mpihira Ozzy Osbourne. Voalohany tonga tao an-sain'ny ny mpanatrika noho ny zava-misy Asehoy ny Osbournes, izay nanaraka ny fiainan 'ny fianakaviany. Tatỳ aoriana, dia lasa Mpanome rariny ny Britanika, ary tany am-boalohany ny dikan-fifaninanana The X Factor sy ny Amerikana dikan 'ny fifaninanana America mitady talenta.
Diary ny adala irery no faharoa Studio rakikira amin'ny teny anglisy mpihira rock mavesatra Ozzy Osbourne, navoaka tamin'ny 1981.Seznam skladebBonus ny reissue ny 20022011 'Lova navelan'i Edition' kapila 2Všechny hira dia voasoratra tamin'ny nitety ny Blizzard Ozz.SestavaOzzy Osbourne - Rhoads zpěvRandy - kytaraBob Daisley - Gong, basse, zpěvLee Kerslake - amponga, percussion, tubular lakolosy, tympányReference
Ny "Train Crazy" dia hira nataon'ny mpihira anglisy Ozzy Osbourne. Miaraka aminy dia baomba gitarista Bob Daisley sy gitara Randy Rhoads. Navoaka tao amin'ny solo voalohany solo, Blizzard of Ozz, tao amin'ny 1980 izy io. Ny hira dia ny tokana voalohany tao anaty rakikira. Daisley dia nanao hetsika 2016 hanoherana Osborne noho ny tsy nandoavany ny saram-pihirana. Ny Guitar World dia nantsoina hoe solo Rhoads ao amin'ny hira ho ilay solo gitara tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Ozzfest dia isan-taona am-polony maro tsingerim-ny fampisehoana (in 2005 - 26) fatorana izay milalao Heavy Metal, Hard Rock, ny fahafatesana Metal, Hardcore sy Nu Metal, vita avy any Etazonia sy Eoropa. Ny mpikarakara dia Ozzy Osbourne sy ny vadiny Sharon.
Bark amin'ny Moon dia sarimihetsika tranainy an-tariby faharoa amin'ny mpihira metaly anglisy Ozzy Osbourne, navoaka tamin'ny Novambra 1983. Izy no sarimihetsika voalohany nataon'i Osbourne, izay tsy misy mpilalao gitara Randy Rhoads, izay maty iray taona mialoha ny famotsorana azy. Ilay rakikira dia nasongadina ny guitarist Jake E. Lee, mpikambana taloha Mickey Ratt, Rough Cutt sy Dio.
Tsy misy ranomaso maromaro ny Ozzy Osbourne tamin'ny fahitalavitra studio. Natao tao amin'ny 1991 tao amin'ny A & M Studios sy Devonshire Studios tany Los Angeles, Californie ny asany. Ny albumo dia novokavin'i Duane Baron sy John Purdell ary navoaka tamin'ny Septambra 1991 ao amin'ny Epic Records. Tamin'ny 2000, dia namela kopia an-tapitrisany tamin'ny 4 ireo albums ary nahazo alimo platinum efatra.
Rudy Sarzo (18 novambra 1950 Havana, Kiobà) dia vato kobanina-amerikana matanjaka sy gitarista mahery vaika. Sarzo dia nilalao niaraka tamin'ireo vondrona malaza maro, anisan'izany ny Quiet Riot, Ozzy Osbourne, Whitesnake, Manic Eden, Dio na Blue Öyster Cult.
Ny Fahotana Ultimate no sarimihetsika solo-driaka efatra nataon'ny mpihira britanika Ozzy Osbourne. Sambany vao navoaka tamin'ny Epic Records ny 1986. Ny albumo dia novokarin'i Ron Nevison. Ao amin'ny Billboard 200, napetraka tao amin'ny gara fahenina ilay rakikira.
Reunion dia mivantana rakikira ny Britanika metaly mavesatra tarika Black Sabata mozika, ao amin'ny taona iray nomena 1997 poté.Seznam skladebVšechny hira amin'ny Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler sy Bill Ward, raha tsy jinak.Disk 1 "Ady kisoa" - 8 : 28 "ao ambadiky ny mandan'i Sleep" - 4: 07 "NIB" - 6: 45 "Fairies Manaova Boots" - 6: 19 "Electric fandevenana" - 5: 02 "Sweet Leaf" - 5: 07 "miolakolaka Architect" - 5: 40 "ho any ny banga" - 6: 32 "Snowblind" - 6: 08Disk 2 "Sabata Mpandatsa-dra Sabata" - 4: 36 "Orchid / Tompon'ny Tontolo ity" - 7: 07 "Dirty Vehivavy" - 6: 29 " Black Sabata "- 7: 29" Iron Man "- 8: 21" zanaky ny Fasana "- 6: 30" saro-tahotra "- 4: 28" Psycho Man "(Osbourne, Iommi) - 5: 18" Mivarotra ny Foko " (Osbourne, Iommi) - 3: 10SestavaOzzy Osbourne - zpěvTony Iommi - kytaraG eezer Butler - baskytaraBill Ward - amponga
Black Sabbath Vol. 4 no lohatenin'ny mozika mozika avy amin'ny vondrona mozika amin'ny teny Black Sabbath izay navoaka tao amin'ny 1972. Ity rakikira ity koa dia asa an-tsarimihetsika ao amin'ny fanahin'ireo aloka telo teo aloha, saingy miaraka amin'ny acoustics vaovao sy ny vokatra feo. Ny FX sy ny Laguna Sunrise dia tsy manan-danja afa-tsy ireo sisa tavela amin'ity rakitsoratra ity.
Zakk Wylde, tamin'ny anarany manokana Jeffrey Phillip Wiedlandt, (* 14 Janoary 1967, Bayonne, New Jersey, Etazonia) dia mpitsikera guitarista sy mpihira Amerikana .20. May 1987 dia lasa mpikambana ao amin'ny tarika Ozzy, mpihira Black Sabbath. Raha vao namoaka ny asany i Ozzy, dia nanapa-kevitra ny hanangana ny Pride and Glory tarika izy. Tao amin'ny vondrona 1993 dia navoaka ny rakikira Pride and Glory. Herintaona taty aoriana dia niverina tany amin'ny sehatry ny mozika i Ozzy, ary niverina tany amin'ny tarika mpanaraka izy.
Aza manao na inona na inona maty! dia ny rakitsary Studio fahavalon'ny banditry britanika Black Sabbath. Niaraka tamin'ny rakikira, Teknolojia Ecstasy dia tsy nahomby intsony tahaka ny alaham-bato Black Sabbath teo aloha. Ity ihany koa ny album Black Sabbath 70 farany. taona ary farany niaraka tamin'i Ozzym.
Hey Stoopid dia ny tahirin-tsarimihetsik'i amerikana Alice Cooper Amerikana, izay navoakan'ny 1991 tao amin'ny Epic Records tamin'ny Jolay. Navoakan'i Peter Collins, vahiny maromaro, anisan'izany ireo mpilalao guitarista Joe Satriani, Steve Vai sy Slash, mpihira Ozzy Osbourne sy bass guitarist Nikki Sixx.
Sabotage no rakitsarim-pahaizana seza-n'ny biraon'ny tarika britanika Black Sabbath. Ozzy Osbourne mpanadihady matetika dia nitaraina nandritra ireo taona nifandrenesan'i Tony Iommi tamin'ny fananganana studio ho an'ity album ity. Tamin'ny alàlan'ny alisaky teo aloha, Sabotage dia voarakitra sy namokatra ela be, ka nahatonga azy ho rakikira ratsy indrindra nakambana (ny rakikirany voalohany dia vola 100 dolara, ary naharitra andro maromaro ny fandraisam-peo).
Mike Bordin (* 27, Novambra, 1962, San Francisco, Californie, Etazonia) dia mpamono Amerikana sady mpanorina ny banditry Metal Metal Faith No More, fantatra amin'ny anarana hoe drummer Ozzy Osbourne. Ny fampahalalana azy dia dreadlocks sy shorts lava.
"Sabotsy mainty" dia sombin-dahatsary fampidiran-dresaka avy amin'ny rakikira mavesatry ny sabatry ny Black Sabbath Black Sabbath izay navoaka tao amin'ny 1970. Ny hira dia nosoratan'ireo mpihira, Ozzy Osbourne, mpihira, Tony Iommi, bass guitarist Geezer Butler ary mpiloka Bill Ward ary novokin'i Rodger Bain.
Teknolojia Ecstasy no sabotsy mainty Album an'ny Sabata. Ity sary miaraka amin'ny Never Say Die! dia tsy mbola nahomby tamin'ny alàlan'ny alatsinainy teo aloha tamin'ny Sabata mainty hoditra. Ny lahatsoratra momba ny zava-mahadomelina, ny fivarotan-tena ary ny transvestites dia miseho. Misy rivo-piainana maizina. Ny "Rock 'n' Doctor Roll 'ary" It's Right "(hirain'ny mpamoaka tantara Bill Ward) dia samy hafa amin'ny famokarana orinasa. Ankoatra izany, ny fanandramana amin'ny fanalahidy sy ny synthesizers dia mbola mandeha kokoa noho ny albums teo aloha. Ny hira "She's Gone" dia voarakitra miaraka amin'ny orkesitra. Ilay mpihira malaza Marie Rottrova dia nihira azy ary namoaka ilay hira hoe "Fitiavana, mandavorovoro ny orana".
13 no rakipahalalana arisiva faha-19 an'ny banditry ny tarika mavesatra britanika Black Sabbath. Natao tamin'ny August 2012 ny asongadiny hatramin'ny volana Janoary amin'ny taona manaraka. Navoakan'i Rick Rubin, navoaka ny 7. Jona 2013. Izy io no rakikira voalohany hatramin'ny 1995, rehefa navotsotra ny Forbidden ary ny voalohany niaraka tamin'ny mpihira Ozzy Osbourne hatramin'ny 1978 rehefa tsy miteny mihitsy! Ny telo amin'ireo mpikambana voalohany ao amin'ny tarika dia milalao ilay rakikira: guitarist Tony Iommi, bass guitarist Geezer Butler sy Osbourne mpihira. Mpamoaka bala Bill Ward dia ny fananganana ny tarika ary nosoloan'i Brad Wilk, mpikambana ao amin'ny Rage Against the Machine sy Audioslave.
Ny Sabata mainty dia metaly metaly anglisy, noheverina fa mpanangana metaly mavesatra, izay nisy fiantraikany tamin'ny fomba maro hafa. Orinasa niavaka: Ozzy Osbourne (vocals), Tony Iommi (gitara), Terrance "Geezer" Butler (bass) ary Bill Ward (drums).
Electric Lady Studios dia firaketana an-tsoratra ao amin'ny Greenwich Village any New York. Izy no nanangana ny guitarist 1970 Jimi Hendrix ary i John Storyk no mpanao mari-trano. Ankoatra ny Hendrix, AC / DC, Ozzy Osbourne, Kiss, Blondie, Patti Smith, The Clash, The Magnetic Fields, Mike Oldfield na Nas dia nanoratra ity fanoratana ity.
Kelly Michelle Lee Osbourne (* 27 October 1984 London) dia mpihira anglisy, zanakavavin'ny mpihira malaza Ozzy Osbourne. Namoaka rakitsary mozika telo izy .DiskographyShut Up (2002) Fiovana (2003)
Don Airey (* 21. 1948 Jona, Sunderland, Angleterre) dia fitendry Britanika mpilalao, izay nanomboka tamin'ny 2002 milalao ao amin'ny vatolampy ny vondrona Deep Purple, fanoloana Jon Lorda.Tvoří sy ny mozika moves toerana nandritra ny taona maro, niara-niasa tamin'ny mpitendry mozika Gary Moore, Ozzy Osbourne, Jodasy mpisorona, Black Sabata, Jetro Tull, Whitesnake, Colisée II, mpanota Michael Schenker, Uli Jon Roth, Rainbow, divlje jagode sy ny fiainana mafy sy niara-niasa ihany koa tamin'ny Andrew Lloyd Webber.
Ozzmosis dia Ozbeka Osbourne's seventh studio album. Tamin'ny taona 1995 tao Guillaume Tell Studios (Paris, France), Right Track Recording (New York City), Bearsville Studios (Woodstock, New York) ary ny Electric Lady Studios (New York City, New York) no nanoratany ny soniany. Ny album dia novokarin'i Michael Beinhorn ary navoaka tamin'ny 1995 tamin'ny volana oktobra tao amin'ny Epic Records ilay rakikira. Tao amin'ny laharana UK no napetraka tao amin'ny 22. toerana ary any Etazonia amin'ny fahaefatra. Namidy mihoatra ny roa tapitrisa i Alba ary nahazo alalana platinum roa.
Tommy Aldridge (* 15. Aogositra 1950) dia Amerikana mafy vatolampy sy ny rock mavesatra drummer, fantatra indrindra indrindra amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny Black Oak Arkansas, Pat Travers Band, Ozzy Osbourne, Gary Moore, Whitesnake, Ted Nugent sy amin'izao fotoana izao nilalao Thin Lizzy.
Jet Records dia orinasan-tserasera malaza Britanika natsangana tao amin'ny 1974. Teo ambanin'ity trano famoahana ity, nalefan'ny Electric Light Orchestra (ELO), Roy Wood, Gary Moore, Ozzy Osbourne, Riot, Magnum ary ny hafa ny albums.
Rob Trujillo (* 23 Oktobra 1964) dia mpilalao baolina Amerikana. Izy dia milalao ao amin'ny band Metallica. Izy dia nanatri-maso ny firoborobon'ny Suicidal, ny hatsiaka, ny Black Label Society, ary ny tarika Ozzy Osbourne.
Jimmy DeGrasso (* 16 March 1963 Bethlehem, Pennsylvanie, Etazonia) dia mpamono metaly Amerikana. Nandritra ny taona 1986-2001 nilalao tamin'ny Y & T. Izy koa dia mpikambana ao Megadeth (1998-2001), Dokken (2012), ary niasa nandritra ny taona maro tao amin'ny escort Alice Coopera. Satria i 2012 dia mpikambana ao amin'ny Black Star Riders superset. Niara-niasa tamin'ny mozika toy ny Ozzy Osbourne, ny fahaleovantena Suicidal ary David Lee Roth.
Miaraka tonga ny Spider no amby roa-polo fahadimy trano fakana raki-kira amin'ny alalan'ny American mpihira Alice Cooper, navoaka tamin'ny 2008 ary indray ao 2010.Seznam hira "Sasin / Fantatro misy anao" (Cooper, Saber, Hampton) - 4: 21 "Ahy ny famaliana" (& tavy) (Cooper, Saber, Hampton) - 4: 26 "Mifohaza ny Maty" (& Ozzy Osbourne) (Cooper, Osbourne Saber) - 3: 53 "Sambory Ahy raha azonao atao" (Cooper, Saber, Hampton) - 3: 15 "(mifandray amin'ny) ny Feminine Side" (Cooper, Garric, Johnson, Kelli) - 3: 16 "voahodidina lamban-Silk" (Cooper, Saber, Hampton) - 4: 17 "Maty Noho ny fitiavana" (Cooper , Garric, Bacchi, Kelli) - 3: 34 "Noana aho" (Cooper, Saber, Hampton) - 3: 58 "ilay nandositra" (Cooper, Kelli, Jani Lane) - 3: 21 "Famonjena" (Cooper, Saber, Hampton, Fowler) - 4: 36 "Izaho no Spider / Epilogue" (Cooper, Saber, Hampton) - 5: 21SestavaAlice Cooper - vocals, manampy zpěvDanny Saber - gitara (XNU MX 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 sy 10); slide guitar (11); ebow (4); basse (4, 1, 3, 6, 8 sy 10); piano (11); Fanalahidy (7, 1, 3, 6, 7, 8 sy 10); synthesizer (11); String Arrangements (4 sy 10)
March ör Die dia 10. studio album an'ny vondrona metatra britanika Motörhead, voarakitra tao Londona tamin'ny marsa 1992. Mampiseho ny herin'ny gitara telo izy - Würzel, Lemmy, Zööm. Ny band dia namoaka ny March martsa ör Die, izay nifarana tao amin'ny 20. toerana eo amin'ny latabatra britanika ao ambadiky ny mpihira Angel of the Gambler avy amin'ny Iron Maiden avy amin'ny 1993. Amin'ny maha-tokana azy, i Cat Scratch Fever sy Hellraiser dia navotsotra tao amin'ny namana Oscar-Lemmy, Ozzy Osbourne sy ny naman'i Motorhead.
Planet Caravan dia hira mahagaga avy amin'ny tarika britanika Black Sabbath. Ny tononkira sy ny melodia manokana dia mamorona atmosfera iray nofinofy; hirahiran'ankizy rafitra manana fomba tsy ara-dalàna sy ny loko isan-karazany maneho terestrialy sy astrophysical trangan-javatra, noho izany dia azo sokajiana ho ampahany toerana vatolampy. Niseho teo amin'ny fandrosoana rakikira saro-tahotra ny 1970 ary na dia tsy mandinika Black hira Sabata, dia nilalao ny Amerikana Pantera tarika, izay ahitana azy amin'ny rakikira noroahina lavitra.
Ao amin'ny Cover dia ilay sarimihetsika solo-sivy natokana ho an'ny mpihira britanika Ozzy Osbourne navoakan'ny 2005 tao amin'ny Epic Records tamin'ny Novambra. Ny mpamokatra azy dia Mark Hudson ary napetraka tao amin'ny 134 ilay rakikira. toerana ao amin'ny Billboard 200. Ny rakotra rakitsary dia misy rakotra; iray tamin'izy ireo, koa, "Ny Queen Mississippi" avy ao amin'ny tarika Mountain, dia niseho ihany koa. Ao amin'io lahatsary io izy dia milalao Leslie West, mpikambana ao amin'ny vondrona Mountain, ary mpandrindra ny hira. Ao amin'ny hira "All the Young Dudes", mihira ny tononkalo Ian Hunter ao amin'ny dikan-teny voalohany navoakan'i Mott the Hoople.
Discography Britanika metaly mavesatra tarika Black Sabbath.Oficiální Discography skupinyStudiová albaMnoho amin'izy ireo (ny voalohany 8 amin'ny Ozzy sy ny roa voalohany amin'ny Diem) heverina vy Classics. Maro hafa (indrindra Ateraka Indray sy Albums amin'ny Tony Martin) dia tena kultovní.Koncertní albaKompilační albaNeoficiální / diskografieTyto Albums hafa dia tsy ofisialy - tsy navoaka amin'ny fiaraha-miasa fitantanana členů.1980 - Live amin'ny farany (1973 - Iommi, Osbourne, Butler, Ward); #5 UK. Remastered tatỳ aoriana, ary nafahana tamin'ny fomba ofisialy ho iray amin'ny roa disks Past Lives.1977 - lehibe indrindra Hits. Tsy fanafahana lehibe indrindra Hits 1970-1978, izany dia fitambaran'ireo folo lalan'ny voalohany Albums fizarana dimy ny Loholona Pieter Brueghel ny "El triunfo la muerte" toy ny fonosana.
Mick Wall (* 23 June 1958) dia mpitsikera mozika britanika, radio ary televiziona sy mpanoratra. Nanomboka ny asany tamin'ny 1977 ho an'ny gazetiboky Sound. Nanomboka nanoratra ho an'i Kerrang izy tao amin'ny 1983! Taty aoriana dia nisoratra anarana izy ho mpanoratra ny tantaram-piraisan'ireo mpanakanto rock toy ny Ozzy Osbourne, Status Quo, Led Zeppelin, Iron Maiden, Guns N 'Roses na Metallica.
Lee Kerslake (* 16. 1947 Aprily in Bornemouth, Dorset, UK) no lava indrindra drummer mitendry ao amin'ny vatolampy ny tarika Oria vondrona Heep.Do nanatevin-daharana tamin'ny Novambra 1971, 1979 ronono izy tamin'ny Oktobra, ary indray tamin'ny Aprily 1982 niditra. Niala tanteraka tamin'ny vondrona izy noho ny antony ara-pahasalamana tao 2007. Talohan'ny vanim-potoan'i Uriah Heep dia mbola mpikambana ao amin'ny The Gods ihany izy. Izy koa dia nibanjina ny alisetra nataon'i Uriah Heep Ken Hensly sy David Byron. Tamin'ny taona 1979-1982 tanterahana amin'ny Black Albums amin'ny Sabata sy Ozzy Osbourne. Niasa toy ny Studio mozika, miaraka amin'ny bassist Bob Daisleyem amin'ny Ozzy ny Albums Blizzard ny Ozz sy Diary ny adala, ary ny fampisehoana ny lasa momba ny Litigation teo amin'izy ireo sy ny Ozzy Osbourne.
Teraka indray dia ny Black Album's 11th studio album. Izy irery ihany no Ian Gillan, mpihira Deep Purple teo aloha. Niverina tao amin'ny lahatsoratr'i Bill Ward koa izy. Ny rakikira dia iray amin'ireo no tsara indrindra amin'ny tantaran'ny tarika. Notapahana ny tsikera tamin'ny fotoana nafahana, saingy nahatratra ny 4. toerana ao amin'ny UK Chart, izay ny laharana ofisialin'ny UK, ary tonga any amin'ny 40 ambony any Etazonia.
Bill Ward (teraka William Thomas Ward, 5. May 1948, Aston, Birmingham, Angletera) no drummer ny metaly mavesatra britanika malaza tarika Black vondrona Sabbath.Ve nilalao amponga hatramin'ny nitsanganany in 1969 mba 1980 hiditra sy mihira solo amin'ny hira roa an'ny Sabotsy mainty; "Tsy maninona" (rakikira Technical-mahadomelina), ary "Swinging The Chain" (rakikira Tsy ho Faty Say!).
Ny Sabata mainty no sary voalohany ho an'ny tarika britanika amin'ny anarana mitovy amin'izany. Nafahana izy io tamin'ny zoma, fahatelo ambin'ny folo (13, Febroary). Mpitsikera maro, ity rakikira ity, indrindra ny lahatsoratry ny lohateny, no rakitsoratra voalohany metaly. Ny fiantraikan'ny Led Zeppelin, indrindra fa ny blues, dia miharihary ihany koa. Nahatratra ny 2003 ny 238. 500 lisitr'ireo rakitsary tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra ao amin'ny gazetin'i Rolling Stone. Araka ny guitarist sy mpanorina ny Sabata mainty Tony Iommi, dia nandrakitra ny album nandritra ny andro iray ny 16. Oktobra 1969.
Araka nástrojeZpěvOzzy Osbourne (1969-77, 1978-79, 1985, 1997-2006, 2011-ankehitriny) Dave Walker (1977-78) Ronnie James Dio (1979-83, 1991-92) Ian Gillan (1982-84) David Donato (1984-85) Glenn Hughes (1985-86) Ray Gillen (1986-87) Tony Martin (1987-91, 1992-97) Rob Halford (1992: iray fampisehoana, 2004: Ozzfest) KytaraTony Iommi (1969-2006, 2011 ny, mbola) BaskytaraGeezer Butler (1969-85, 1991-94, 1997-2006, 2011-ankehitriny) Dave Spitz (1985-86, 1987) Bob Daisley (1986) Jo Burt (1987-88) Laurence Cottle (1988-89) Neil Murray (1989-91, 1994-97) KlávesyGeoff Nicholls (1985-91, 1992-97) amponga Bill Ward (1969-1980, 1982-83, 1984-85, 1994, 1997-98, 1999-2006, 2011- 2012) tartaric Appice (1980-1982, 1991-92, 1998) Bev Bevan (1983-1984, 1987) Eric Singer (1985-1986) Terry Chimes (1987-1988) Cozy Powell (1988-1991, 1994-95) Bobby Rondinelli (1992-1994, 1995-97) Mike Bordin (1997) Tommy Clufetos (xNum X-ankehitriny) Related Lahatsoratra
Miasa Class Hero (Czech miasa kilasy mahery fo) John Lennon ny hira hatramin'ny voalohany rakikira John Lennon / Plastic Ono Band araka ny fisarahana ny The Beatles.Cover verzePíseň Tena malaza toy ny fonony dikan: David Bowie ny tarika Tin MachineCyndi LauperRoger TaylorMarilyn MansonNoir DésirOzzy OsbourneManic Street PreachersGreen DayScreaming TreesExterní linkText of songs translated into Malagasy
Master ny zava-misy dia ny rakikira fahatelo amin'ny metaly mavesatra malaza Britanika tarika Black Sabata nivoaka tamin'ny 1971. Tany Angletera, nahatratra ny 5. příčky.Na rakikira ity mpitendry gitara Tony Iommi miala aloha ny gitara tamin'ny telo semitones nidina nankany C♯ mba hampihenana ny olana kofehy, amin 'izany hanisy ratsy ny rantsan nilalao tsara kokoa. Noho ny lalina sy "muddier" feo tonga fananarana ity rakikira.
Fanomezam-boninahitra mety ho: vola hetra (album, Paul Motian) - rakikira drummer Paul Motian (1974) Tribute (album, Ozzy Osbourne) - Album ny mpihira Ozzy Osbourne (1987) Tribute (album, Keith Jarrett) - Album ny mpitendry piano Keith Jarrett (1989) Tribute (album, Roy Rogers) - rakikira drummer Roy Rogers (1991) Tribute (album, Yanni) - raki-kira mozika Yanniho (1997) Tribute (album, Emilie-Claire Barlow) - Album ny mpihira Emilie-Claire Barlow (2001)
John Robert "Bob" Daisley (* 13. 1950 Febroary, Sydney, Aostralia) dia any Aostralia mpitendry zavamaneno, bassist sy lyricist izay niara-niasa tamin'i Ozzy Osbourne, Oria Heep na Gary Moore. Izy amin'izao fotoana izao ny tarika milalao miaraka amin'ny Living mafy.